Nei UNWTO Secretary-General Zurab Polokashvili asina kumbobvira asarudzwa nemazvo?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Nei UNWTO Secretary-General Zurab Polokashvili asina kumbobvira asarudzwa nemazvo?
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
22 min kuverenga
Mushure memakore mana, zvinova pachena kuti sarudzo ya4 yaUNWTO Secretary-General yanga isina kukodzera. Zurab Pololikashvili haafanire kuve Iyezvino Secretary-General. Panogona kuve nemukana wekuti kuGeneral Assembly iri kuuya kuMorocco, kukanganisa uku kunogona kugadziriswa.
Pane nhanho mbiri dzinofanirwa kuteverwa mukuita kwesarudzo kweUNWTO Secretary General, uye ese ari maviri haana kuteedzerwa nemazvo muna 2017.
Nhanho yekutanga isarudzo yakaitwa neUNWTO Executive Council yakaitika muMadrid musi waMay 10, 2017. Mitemo yemitemo nemaitiro akasimbiswa emasangano aya akatyorwa.
Nhanho Yechipiri: Chinyorwa 22 cheMitemo yeSangano chinoti: “Secretary-General achabvumidzwa nezvikamu zviviri kubva muzvitatu ”- ("nhengo dzizere”Zvinoreva nyika dzinozvitonga). Mitemo yepamutemo uye yakasimbiswa maitiro esangano zvakatyorwa zvakajeka.
Kurudziro inoitwa nechikamu chechi105 cheUNWTO Executive Council kukurudzira VaZurab Polokashvili vanobva kuGeorgia saSecretary-General wavo kutsiva Dr. Taleb Rifai kubva kuJorodhani anofanirwa kunge asiri echokwadi nekuti nzira nemirau yakatyorerwa zvisirizvo. Iye chipangamazano wezvemutemo weUNWTO uye gweta Muzvare Gomez zvakashata-akaraira Dr. Taleb Rifai uyo aivimba nekuwongorora kwake.
Iko kusimbiswa kwaVa Pololikasvili ku XXII UNWTO General Assembly yakaitirwa kuChengdu, China musi wa Gunyana 13-16, 2017 nekurumbidzwa kwaive kusingabvumirwe uye kwakatyorwa zvakajeka mirau yakavakirwa pane zvirevo zvisina kunaka negweta reUNWTO uye chipangamazano wezvemitemo Mai Alicia Gómez
Mai Alicia Gómez vachiri kushanda kuWorld Tourism Organisation sa chipangamazano wezvemitemo uye vakakwidziridzwa pachinzvimbo ichi chiri nani nguva pfupi mushure mekunge VaPololikasvili vatora chigaro muna Ndira 2018.
Akakurumbira uye mukuru eTurboNews sosi inozivikanwa kwazvo nenyaya iyi yakaongorora tsananguro naPurofesa Alain Pellet, aimbova chipangamazano wezvemitemo weUNWTO.
Tsananguro yaPellet yechokwadi chekupokana zvine chekuita nesarudzo yemumiriri neUNWTO Nhengo yenyika inotsanangura mamiriro ezvinhu mukwikwidzi Alain St. Ange aive.
Panguva ino, Alain St. Ange yakapihwa mubairo anodarika miriyoni yeSychelles Rupees yekubviswa zvisirizvo pasarudzo yeUNWTO. Kubviswa kwake kwakanyatsobatsira Mr. Pololikasvili kuhwina.
Sezvinotaurwa nezita eTurboNews pamusoro pemakore mana apfuura, pane zvakawanda zvisina kujairika zvinyorwa zvakaburitswa nechinyorwa ichi kubiridzira, kubata, nezvimwe.
Pane imwe yekupedzisira mukana wekugadzirisa zvimwe zvisizvo.
Maziso ese akatarisa kuGeneral Assembly iri kuuya muMarrakesh, Morocco kupera kwaNovember.
Matanho akapihwa masimba sei asina kuteverwa pasarudzo dza2017?
Sezvakatsanangurwa pakutanga, pane matanho maviri mukuita kwesarudzo kweUNWTO Secretary-General
Hapana kana awa matanho maviri esarudzo akateedzerwa maererano nemitemo yepamutemo uye maitiro akasimbiswa esangano.
Kurudziro yeKanzuru yeKanzuru
Mutemo 29 weMitemo yeMabatiro eDare reMakurukota anoti kurudziro yemunhu akasarudzwa pachigaro cheSecretary-General inoitwa nevhoti yakavanzika uye vhoti yakawandisa panguva yemusangano wega wega weKanzuru.
Chirevo "vakawanda, ” izvo zvinogona kuve zvinotsausa, zvinotsanangurwa sekuenderana nemakumi mashanu nekuwedzera imwe yemavhoti (kana paine nhamba isinganzwisisike, iyo nhamba yakakwira kupfuura hafu yemavhoti) yakaitwa nenhengo dzeDare varipo uye vachivhota.
Mutemo uyu unoti: “kana pasina mumiriri anogamuchira ruzhinji muvhoti yekutanga, wechipiri, uye kana zvichidikanwa kuchaitwa mamwe mavhoti ekugadzirisa pakati pevachakwikwidza vaviri vanowana mavhoti akawandisa mukuvhota kwekutanga. ”
Muchiitiko chekuti vaviri vakwikwidza vagovane nzvimbo yechipiri, mumwe kana akati wandei mavhoti anogona kudikanwa kuti vaone kuti ndivanaani vavachakwikwidza muvhoti yekupedzisira.
Muna 2017, apo vavhoti vatanhatu vaimhanya (mushure meanomweth imwe kubva kuArmenia yakanga yaramba), sarudzo dzakapedzwa pakuvhota kwechipiri.
VaPololikashvili vakakunda VaWalter Mzembi vekuZimbabwe.
Muvhoti yekutanga, mhedzisiro yaive: VaJaime Alberto Cabal (Colombia) nemavhoti matatu, Mai Dho Young-shim (Republic of Korea) nemavhoti manomwe, VaMarcio Favilla (Brazil) nemavhoti mana, VaWalter Mzembi nemavhoti gumi nerimwe, uye VaZurab Pololikashvili nemavhoti masere.
Muvhoti yechipiri, VaPololikashvili vakawana mavhoti gumi nemasere, uye VaMzembi 18. VaAlain St. Ange kubva kuSychelles vabvisa chigaro chavo sarudzo dzisati dzaitwa.
Ndiani angave mukwikwidzi weUNWTO Secretary-General?
Kuti uve mukwikwidzi pachinzvimbo cheMunyori-Mukuru weWorld Tourism Organisation, unofanirwa kuzadzisa mamiriro akasiyana uye uteedzere maitiro, akatsanangurwa pamusoro pemakore, kubva 1984 kusvika 1997.
Iwe unofanirwa kuve mugari wenyika yenhengo yenyika, uye nyika ino haifanire kunge yakaunganidza nzvimbo dzisina kukodzera mumipiro yayo.
Sarudzo yaSecretary-General imakwikwi pakati pevanhu, kwete pakati penyika. Nekudaro, hapana munhu anogona kumhanya pane kwake ega kufamba.
Vadzidzi vanofanirwa kuunzwa nemasimba ane hunyanzvi enhengo yenyika (mutungamiri wenyika, mukuru wehurumende, gurukota rezvekunze, vamiriri vanokwanisa…).
Iri basa re "firita" harifanire kutorwa sekubvumidzwa, kutsigirwa, kana kunyangwe kurudziro yakapihwa nehurumende, sezvo dzimwe nguva ichitaurwa zvisirizvo mune mamwe mapepanhau eUNWTO kana magwaro.
Mazwi akakosha: icho chingori chikumbiro.
Sarudzo CE / DEC / 17 (XXIII) yakatorwa neKanzuru yeKanzuru pamusangano wayo wa1984 wa23, uyo wakaisa maitiro akateedzerwa kusvika nhasi, inoti: “vakwikwidzi vachakwidzwa zviri pamutemo kuKanzuru kuburikidza neSecretariat nehurumende dzenyika dzavanobva… ”
Iko hakuna kuzivikanwa pakati peanokwikwidza nenyika: hapana kupihwa kwemagwaro kunogona kukanganisa hurumende kuendesa maviri kana anopfuura mamiriri.
Kamwe mukwikwidzi paunogamuchirwa, zvinotaurwiswa kuburikidza netsamba verbale neSecretariat kunhengo dzesangano.
Kana nguva yekugashira mamakisi yasvika (kazhinji mwedzi miviri chisati chapera), gwaro rinogadzirirwa neSecretariat uye rinotumirwa kunhengo dzeKanzuru dzinoratidza runyorwa rwekupedzisira rwevanoda kukwikwidza, nekutaurirana magwaro ayo mumwe nemumwe wavo anofanira kupa (tsamba yesarudzo kubva kuhurumende dzavo, curriculum vitae, chirevo chebumbiro uye chinangwa chekutonga, uye, nguva pfupi yadarika, chitupa chehutano hwakanaka).
Icho chiri pazasi pegwaro iri, iro rinoyeuchidzawo maitiro anofanirwa kuteverwa, ndipo panotorwa danho reMutungamiriri wedare rekukurudzira munhu akasarudzwa kuParamende.
Zvinotaridza kuti hapana pekuti runyorwa rwekupedzisira rwevamiriri rwakafambiswa rwunogona kuchinjwa pane inotevera nhanho.
Nekudaro, iro gwaro CE / 112/6 REV.1 rakaburitswa muna 2020 rekutungamira sarudzo irikuenderera yaMunyori-Mukuru kwenguva ya2022-2025 zvinoshamisa zvinoratidza kuti “Kubvumidzwa kwemukwikwidzi nehurumende yenhengo yenhengo chinhu chakakosha uye kubviswa kwacho kuchakonzera kusabvumiranwa kwemumiriri kana musarudzo. "
Uku kufunga kwakasarudzika kugadzirwa kubva kuSecretariat yazvino yesangano.
Iko mukana wekubviswa kwechirongwa chehurumende (kwete "tsigirot, ”sekutaurwa kwazvakaitwa kare, hazvibude mune chero zvinyorwa zvemutemo zvinoshanda kana danho resangano chero ripi - Kanzuru neParamende - inobatanidzwa mukuita uku.
Fungidziro inoshamisa yekuti musanangurwa anogona kuve asina kukodzera pakati pegadziriro yesarudzo, mamiriro ezvinhu anogona kumisikidza kurudziro nyowani yakapihwa neKanzuru pachiitiko chechikamu chinotevera, haina kufungidzirwa - uye nechikonzero chakanaka! -
kwete muMitemo kana muMitemo yeMitemo yemasangano maviri akabatanidzwa.
Kufungidzirwa kwakataurwa nezve mukana wekuti hurumende ibvise chikumbiro chayo mukati mehurongwa hwacho yakanga isati yaonekwa mugwaro reEC / 84/12 rakaburitswa muna2008 kutungamira kusarudzwa kweakafanotungamira iyezvino Secretary-General kwenguva 2010 -2013, kana mugwaro CE / 94/6 rakaburitswa muna2012 kwenguva ya2014-2017.
Zvinotonyanya kukosha, yaive isipo pagwaro CE / 104/9 rakaburitswa muna 2016 kutonga sarudzo yesarudzo yegore ra2018-2021.
Ndiwo mavara uye inoenderana kanzuru sarudzo yaitonga sarudzo ya2017. Icho chokwadi chekuti makore mana gare gare kuongororwa kutsva, kwakapesana nekunzwisisa kwepamberi kwemaitiro, kunoziviswa, kunoonekwa sekushomeka kwekururamisa kudzosera kumashure chikanganiso chakaitwa muna2017 pachiitiko cheMunyori Mukuru wazvino.
Mutsara wekukakavara wakasimudzwa pamusoro, zvichitevera izvo hapana nzvimbo mumagwaro eUNWTO uye maitiro ekubvisa chikumbiro chehurumende chemunhu anokwikwidza kuve Secretary-General, yakasimbiswa nemupurofesa weUniversity, aimbova purezidhendi weUN International Court ye Justice, anga ave ari chipangamazano wezvemitemo wesangano kwemakore makumi matatu, uye kwaari iye chipangamazano wezvemitemo parizvino aive mubatsiri.
Maererano ne eTurboNews tsvagurudzo uyo akatsanangura chifananidzo chiri Alain Pellet. Iye gweta reFrance rinodzidzisa mutemo wepasi rese uye mutemo wepasi rose wehupfumi kuUniversité de Paris Ouest - Nanterre La Défense. Aive Director weCentre de Droit International (CEDIN) weYunivhesiti pakati pa1991 na2001.
Pellet inyanzvi yeFrance mumutemo wepasi rose, nhengo uye aimbova Mutungamiriri weUnited Nations International Law Commission, uye ndiye kana ave kuraira hurumende zhinji, kusanganisira Hurumende yeFrance munzvimbo yemutemo wepasi rose mutemo. Akave zvakare nyanzvi ku Badinter Arbitration Committee, pamwe nemunyori weFrench Committee Jurists pamusoro peKusikwa kweInternational Criminal Tribunal yeAimbova Yugoslavia.
Anga ari mumiriri kana gweta uye gweta mune dzinopfuura makumi matatu neshanu pamberi peDare Repamusorosoro reJustice uye akambotora chikamu mumatanho epasi rose uye epasi rose (kunyanya munzvimbo yekudyara).
Pellet yaibatanidzwa nekushandurwa kweWorld Tourism Organisation (WTO) kuita yakasarudzika agency yeUN, iyo United Nations World Tourism Organisation (UNWTO).
Iyi dudziro ndiyo yega inoenderana nemutemo wekutanga wakasimbiswa muchinyorwa 24 cheMitemo, kuti mukuita basa rake, Secretary-General weUN World Tourism Organisation, pamwe nenhengo yega yega yevashandi, yakazvimirira uye haagamuchire kurairwa kubva kune chero hurumende, kusanganisira yake. Izvo zvinoshanda kune manejimendi enzvimbo inoenderana, mutatis mutandis, kuti mweya utungamire zita.
Muna 2017, iyi nheyo inokosha haina kufuratirwa.
Sezvambotaurwa, vaviri vakakwikwidza vemu Africa vaikwikwidza chigaro che Secretary-General: VaWalter Mzembi veku Zimbabwe naVa Alain St. Ange we Seychelles.
Mune chiitiko chisati chamboonekwa munhoroondo yeUNWTO, muna Chikunguru 2016, nyaya iyi yakaiswa pane zvematongerwo enyika, nechisarudzo cheAfrican Union uye chakagamuchirwa neSeychelles, kutsigira mumiriri kubva kuZimbabwe.
Hakuna kumbobvira kare mune rimwe sangano repasirese rakapindira nenzira isiri iyo mune zvemukati zviitiko zveWorld Tourism Organisation.
Musi waMay 8, 2017, mazuva mashoma musangano usati waitwa kuMadrid weExecutive Council, Hurumende yeSeychelles yakagamuchira tsamba verbale kubva kuAfrican Union ichikumbira nyika kuti ibvise chigaro chaVaSt Ange, zvichitevera zvirango zvakakomba kubva sangano nenhengo dzaro.
Senyika diki, Seychelles yakange isisina imwe sarudzo kunze kwekubvuma kutyisidzirwa, uye Mutungamiriri wayo mutsva akaudza Secretariat yesangano maawa mashoma pamberi pekuvhurwa kwesangano reKanzuru, nezve kubviswa kwesarudzo yemumiriri wayo.
Nhengo zhinji dzakaona kumonyoroka uku nekuda kwekupindira kwaRobert Mugabe, Mutungamiriri weZimbabwe, uyo akasiya nguva pfupi yadarika chigaro chasachigaro weAfrican Union uye sa "baba" verusununguko rwenyika yake, sevane simba rakasimba. pamusoro pevatungamiriri vemuAfrica. Dr. Walter Mzembi vaive gurukota mudare remakurukota raRobert Mugabe.
Paakaudzwa nezvekufamba kwenyika yake, Dr. Taleb Rifai, Secretary-General weUNWTO panguva iyoyo, akakurudzirwa kutsvaga zano kuna Mai Alicia Gomez, chipangamazano wezvemitemo weUNWTO.
Akaudzwa naye kuti Alain St. Ange anga asina kodzero zviri pamutemo yekuchengetedza bhiza rake. Secretary-General Taleb Rifai achiri kupa St. Ange pasi pasi mumusangano weKanzuru pamberi penyaya yehurongwa maererano nesarudzo. St. Ange akapa hurukuro yemanzwiro achipokana nei achifanira kubvumidzwa kumhanya.
Nezvikonzero zvakagadzirwa kare, zvinofanirwa kutariswa kuti mhinduro yemupi wezano wezvemitemo, isina kugadziriswa naSecretary-General, yanga isiriyo.
Zvakaoma kunzwisisa kuti sei Secretary-General aibuda panguva iyoyo angadai akafunga, sekuzivisa kwaakaita mushure, kuti sarudzo yekumhanya-mhanya kwaaive nebasa, yaive yakajairika.
Pashoma, pakanga paine kusahadzika kwakasimba pamusoro pekuenderana kwemaitiro acho, uye nenyaya yekuti aka kaive kekutanga chiitiko pane ino chaiyo theme ichiitika.
Nyaya yacho yaifanirwa kunge yakaiswa kunhengo dzeKanzuru kuitira kuti vasarudze maitiro anoteedzerwa.
Izvi ndizvo zvakaitwa nasachigaro wechikamu che55th che Executive Council muna 1997 kuManila pakamuka dambudziko rekududzira mitemo inobata sarudzo.
Nekutsakatika kwemumiriri weSychelles, chibvumirano chemakadhi chakangoerekana chachinja.
Dr Mzembi vakaramba vari ivo chete mukwikwidzi anomiririra Africa, dunhu riine mavhoti mazhinji mukanzuru.
Akatungamira vhoti muvhoti yekutanga.
Zvisinei, zvaive pachena kuti zvakaoma kuti mumiriri weZimbabwe asarudzwe semusoro wesangano reUN apo nyika neMutungamiriri wayo paive nezvirango kubva kunyika zhinji, kusanganisira United States nenhengo dzeCommonwealth neEuropean Union, uye pasi pekushoropodzwa kubva kuSecurity Council yeUnited Nations.
VaPololikashvili vaive pakupera kwezuva vakasarudzwa semhedzisiro yekurambwa kwakabatana nemumiriri weZimbabwe.
Dai Mr. Alain St. Ange, sezvatinofungidzira pano yaive kodzero yavo yekuita kudaro, vakachengetedza chimiro chavo, iyo nyaya ingadai yakave yakasiyana.
MunaNovember 2019, Dare Repamusorosoro reRepublic of the Seychelles rakaziva huchokwadi hwechikumbiro chakaitwa naVaAlain St. Angese zvine chekuita nekudzoserwa kwechikumbiro chake nehurumende.
Zvinoenderana nemutongo uyu, Dare rekukwidza rakatonga muna Nyamavhuvhu 2021 kuti St. Ange icharipwa pamitengo yavakawana uye nekukuvara kwetsika kwavakatambura.
Sarudzo kuUNWTO General Assembly muChengdu, China 2017 - Mhirizhonga Yechipiri:
Izvo zvinodiwa nechinyorwa 22 cheMitemo yezvikamu zviviri kubva muzvitatu muGeneral Assembly kugadza Secretary-General zvataurwa pamusoro.
Zvinoenderana nemutemo 43 weMitemo yeProcessure yeGeneral Assembly: “Sarudzo dzese, pamwe nekudomwa kwaSecretary-General, zvichaitwa nekuvhota kwakavanzika. "
Chibvumirano cheMitemo yeMiitiro chinogadza Mitemo Inotungamira yekuita sarudzo nekuvhota kwakavanzika, kunoitwa kuburikidza nekushandisa mapepa ekuvhota, nhengo yega yega ine kodzero yekuvhota, ichidaidzwa nekutendeuka.
Kana chirevo ichi chiri pachena, mashandisiro acho anomutsa dambudziko rinoshanda sezvo vhoti yega yega iri pasi pechiratidzo chevhoti yakavanzika inotora nguva yakawanda: angangoita maawa maviri angangorasika muhurongwa hwakaomarara hweParamende.
Naizvozvo, kana muchiitwa zvinoita sekunge chibvumirano chakabuda pakati penhengo dzekubvumidza sarudzo yemumiriri akaunzwa neKanzuru yeKanzuru, Dare rinogona kusarudza kuisa parutivi mutemo wepamutemo wekuvhota nevhoti yakavanzika uye voenderera nesarudzo neruzhinji. acclamation.
Iyi nzira yekuita, yakateedzerwa pane maitiro anoteverwa nemamwe masangano epasirese epasi rose, inoda seyakakwana pre-inoda kuti pave nekubvumirana pakati pemitezo yekubvuma kutsiviwa.
Kana zvisiri, iyo Mitemo yeProcessure yaizotyorwa.
Naizvozvo, pachikamu chega chega cheParamende, kana uchitanga nekukurukurirana kwechinhu chiri pazano rekugadzwa kwaSecretary-General, Mutungamiriri weParamende, achiverenga bepa rakagadzirwa neSecretariat, anozivisa nhengo nezve maitiro inoteverwa, ichinyora kuti pazviitiko zvakasiyana zita racho rave richiitwa nekurumbidzwa, asi richisimbirira kuti kana nhengo imwechete ikakumbira kuomerera pamutemo weyakavanzika wekuvhota, uyu anoshanda sekodzero.
Aya ndiwo matangiro akaita hurukuro yesarudzo yaSecretary-General munaGunyana 2017 muGeneral Assembly yakaitirwa kuChengdu.
Zvakatanga naSachigaro vachiverenga gwaro vachitsanangura maitiro anofanira kutariswa. Ichitevera mubvunzo wake wekuti chero nhengo yaipokana nevhoti nekushevedzera uye yaikumbira kunyatso chengetwa kweMitemo, Musoro wevatumwa veGambia akakumbira pasi ndokudaidzira kuvhota pakavanzika.
Mutambo waifanira kunge wapera, gakava raifanira kunge rakamira ipapo, uye kuvhota muchivande kwaifanira kunge kwakatanga.
Izvi handizvo zvakaitika!
Vazhinji vamiriri vakaita kupindira kuneshungu, kungave kutsigira vhoti nekushevedzera kana kudaidzira kuremekedzwa kweMitemo. Kujekeswa kwakabvunzwa kubva kuna chipangamazano wezvemitemo uye kubva kuna Secretary-General.
Panzvimbo pekungotaura mutemo, yavo refu, yakasununguka, uye, pakupedzisira, zvirevo zvisina basa zvakapinza zvakare gakava.
Kukurukurirana kusingaperi kwakave kwakaoma uye kwakanyanya uye kwakanyanya kuvhiringidzika.
Zviripachena kuti vamiriri vaitsigira VaMzembi, kunyanya avo vemuAfrica, vaiedza kuwana chetatu chemavhoti asina kunaka, kuita chipingamupinyi pasarudzo yemunhu akasarudzwa, uye kumisikidza chigaro chitsva ne Executive Council, nevaya vanotsigira yesarudzo yaVaPololikashvili kana kutya kudzoka kwaizokwikwidza musarudzo yemuZimbabwe vaimanikidza kudiwa kwevhoti nemvumo, ku "ratidza kubatana kwesangano. "
Sezvineiwo, nekuda kwekushaikwa kweruzivo rwemitemo naSachigaro, hutungamiriri husina chokwadi kubva kuna Secretary-General, uye kusashanda zvakanaka kweUNWTO chipangamazano wezvemitemo MS Gomez kubatana kwesangano kwaive nenjodzi pane izvozvo nguva.
Secretary-General uye chipangamazano wezvemitemo vangadai vakayeuka kuti nhaurirano imwe chete pamusoro pemaitiro iyi yakaitika panguva yegumi nenhanhatuth chikamu cheGeneral Assembly chakaitwa mu2005 muDakar.
Sezvakangoita kuChengdu, gakava rinovhiringidza pamusoro pekugona kuvhota nekushevedzera kwakatanga.
Semuna Chengdu, nhumwa imwe - Spain - yakaramba, asi vamiriri vazhinji vakakumbira pasi.
Iye Secretary-General panguva iyoyo, uyo aikwikwidza kusarudzwazve, akapindira, kunyangwe dai zvaive zvisiri mukufarira kwake, nekuti vhoti nekushevedzera ndiyo nzira iri nyore yekusapokana. Akarangarira rugwaro rwechinyorwa 43 cheMitemo yeProcedure uye akajekesa kuti sezvo nyika imwe chete, iyo Spain, yakakumbira kuvhota muchivande, hurukuro yakanga yapera.
Kuvhota kwakavanzika kwakaitika, uye, sezvinei, uyo akafanobata chigaro akasarudzwazve ne80 muzana yemavhoti.
Nezve kusarudzwa kweMunyori-General neGeneral Assembly, zvinyorwa zveUNWTO zvinosiya nzvimbo yekusahadzika, uye kusvika 2017, maitiro eSangano aienderana zvizere nemagwaro aya.
Sarudzo yeChengdu yaive nguva inosuruvarisa munhoroondo yeUnited Nations World Tourism Organisation.
Panguva yekuzorora kwegakava, chibvumirano chakapedzwa: mukutsinhana nekutambira kwake vhoti nekushevedzera, basa rakapihwa VaWalter Mzembi kuti vape pfungwa dzekuvandudzwa kwenzira dzekugadzwa kwaSecretary-General - basa iyo, zvechokwadi, yakanga isina yekutevera.
VaPololikashvili naVaMzembi vakaenda pachikuva kuti vambundirwe pasi pekuombera uye mufaro wevakawanda vemitezo, avo, masekondi mashoma apfuura,, nekuziva kana kwete, kutyora Mitemo yeInstitute yavo.
Kana zviri zvekusarudzwa kwemunhu akasarudzwa muMadrid, dai mitemo yairemekedzwa pasarudzo muChengdu, nyaya uye munhu anotarisira UNWTO angave anga akasiyana.
Nyika ye Tourism ikozvino iri kutarisa iri kuuya iyo UNWTO General Assembly kugadzirisa mamiriro ezvinhu, uye kuti kushanya kuve mutambi akasimba wepasirese zvakare.
Izvi zvinonyanya kudikanwa kutungamira iyi indasitiri isina kusimba kune post-COVID-19 nguva. Inoda hutungamiriri hwakasimba uye mari yakawanda.